Inona no tokony hatao raha voatazona any Dubai na voasambotra ao amin'ny seranam-piaramanidina UAE? | Orinasa Mpampanoa lalàna
Inona no tokony hatao raha voatazona any Dubai na voasambotra ao amin'ny seranam-piaramanidina UAE?
Tratra tao amin'ny seranam-piaramanidina UAE?
Nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina UAE?
Notazonina tao amin'ny seranam-piaramanidina Dubai?
Iray amin'ireo risika lehibe indrindra ho an'ny mpizaha tany ny fisamborana na fitazonana any amin'ny seranam-piaramanidina ao Dubai. Ny biraon'ny fampahalalam-baovao ao Dubai dia nilaza teo aloha fa tsy avelan'i Dubai hotazonina ny teratany vahiny raha tsy manaraka ny fombafomba eken'ny sehatra iraisam-pirenena. Izy io koa dia tsy mamela ny governemanta vahiny hanao toby fitazonana ao anatin'ny sisin-taniny. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fomba fiasa rehetra i Dubai, anisan'izany ny an'ny Interpol, mba hihazonana, fakana am-bavany ary hamindrana ireo mpandositra izay mitady azy ny firenena.
Nandritra ny taona maro, nitombo ny isan'ireo mpizahatany vahiny izay tsy mahafantatra ny politika henjana sy tsy misy fandeferana ao Emirà Arabo Mitambatra, any am-ponja rehefa hita fa tsy manana lalàna sy fitsipika. Mety misy antony maromaro itazonana anao, angamba heloka bevava na fahadisoana tsy fantatrao? Ny fandraisana fepetra fisorohana sahaza dia mahasoa anao manokana. Tsy hainao mihitsy hoe rahoviana no ho azo ampiasaina.
Raha any Dubai na Abu Dhabi, raha misy tsy mety. Manaova lisitry ny fifandraisana maika ary avelao olon-kafa manana kopia. Ny lisitry ny fifandraisanao dia tsy maintsy ahitana ny mombamomba ny mpisolovava anao. Misy ny mety ho esorina aminao ny findainao rehefa voatana ianao. Saingy afaka miditra azy ireo haingana ianao rehefa avela hampiasa ny findainao.
Tehirizo ny dika mitovy amin'ny taratasinao
Ataovy azo antoka fa manana kopian'ny antontan-taratasy rehetra ianao. Tena ilaina tokoa ireo mpisolovava anao amin'ny fikatsahana ny raharahanao.
Azo antoka fa tsy handeha any Emirà Arabo Mitambatra ianao, manantena ny ho voatazona. Raha mbola mifikitra amin'ny sata mifehy ny firenena ianao dia afaka toy ny vorona ary misoroka ny mety ho fanorisorenana sy ny fitazonana azy.
Halaviro ny loza mety hitranga amin'ny fisamborana na fitazonana any amin'ny seranam-piaramanidina Dubai
Iray amin'ireo risika lehibe indrindra ho an'ny mpizaha tany ny fisamborana na fitazonana any amin'ny seranam-piaramanidina ao Dubai. Ireto misy torohevitra vitsivitsy hanampy anao hisoroka olana:
Ataovy azo antoka fa manana ny antontan-taratasinao rehetra ianao alohan'ny handehananao. Anisan'izany ny pasipaoronao, ny visa ary ny porofon'ny dia lavitra.
Aza mitondra zavatra tsy ara-dalàna na voarara miaraka aminao. Manana lalàna tena henjana i Dubai momba ny fihazonana zava-mahadomelina, ary na dia kely aza dia mety hitarika sazy an-tranomaizina.
Manaja ny fomba amam-panao sy ny lalàna eo an-toerana. Manaova akanjo maotina, fadio ny fanehoana fitiavana ampahibemaso ary aza misotro na mifoka sigara eny imasom-bahoaka.
Tandremo ny manodidina anao ary tandremo ny entanao amin'ny fotoana rehetra. Tsy olana mahazatra ny halatra any Dubai, saingy tsy te ho iharan'ny heloka bevava ianao.
Zavatra tsy tokony ho entinao ao anaty entanao any amin'ny seranam-piaramanidina UAE
Tsy tokony hitondra entana sasany ao anaty kitaponao ianao rehefa mandeha amin'ny seranam-piaramanidina UAE. Ireto zavatra ireto dia ahitana:
Hammers, fantsika ary fandavahana
Hety, lelany, screwdrivers, ary fitaovana maranitra rehetra
Kitapo fikarakarana manokana mihoatra ny 6cm ny halavany
Ny karazana basy laser sy gadra rehetra
Ny karazana buts rehetra, sy ny entana avy amin'ny firenena ankivy
Maivana kokoa noho ny iray
Miaramila amin'ny fitaovam-piadiana
Walkie-talkie, Ny karazana tady rehetra
Fonosana kasety sy ny karazana fandrefesana rehetra
Câble électrique, afa-tsy ny tariby fampiasa manokana
Fanafody tsy ara-dalàna sy zava-mahadomelina
Pneu reconditions, tandroka ivoara na tokantandroka
Vola sandoka na dika mitovy
Ireo akora nokleary na taratra
Fitaovana manafintohina na manafintohina, anisan'izany ireo fitaovana ara-pivavahana izay mety hoheverina ho manafintohina ny Silamo
Fanafody voarara ao Dubai
Misy fanafody maromaro tsy ara-dalàna ao Dubai, ary tsy ho azonao atao ny mitondra azy any amin'ny firenena. Anisan'izany ny:
Ohatra tena misy amin'ny olona nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina UAE
a) Vehivavy nosamborina noho ny lahatsoratra Facebook
Ramatoa Laleh Sharaveshm, ramatoa 55 taona avy any Londres, dia nosamborina tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Dubai noho ny lahatsoratra Facebook tranainy nosoratany talohan'ny nandehanany ho any amin'ny firenena. Noheverina ho manambany an'i Dubai sy ny mponina ao aminy ilay lahatsoratra momba ny vadin'ny vadiny taloha, ary voampanga ho nanao heloka bevava an-tserasera sy nanivaiva an'i Emirà Arabo Mitambatra.
Niaraka tamin'ny zanany vavy, tsy nahazo fahafahana handao ny firenena ilay reny tokan-tena alohan'ny handaminana ny raharaha. Ny didim-pitsarana, rehefa hita fa meloka, dia handoa onitra £50,000 ary higadra roa taona an-tranomaizina.
b) Lehilahy nosamborina noho ny pasipaoro sandoka
Nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina Dubai ny mpitsidika Arabo iray noho ny fampiasana pasipaoro hosoka. Saika hiakatra fiaramanidina ho any Eoropa ity lehilahy 25 taona ity no tratra niaraka tamin’ilay taratasy sandoka.
Niaiky izy fa nividy ny pasipaoro tamin'ny namana aziatika iray amin'ny £ 3000, mitovy amin'ny AED 13,000. Ny sazy amin'ny fampiasana pasipaoro sandoka any Emirà Arabo Mitambatra dia mety manomboka amin'ny 3 volana ka hatramin'ny herintaona an-tranomaizina sy onitra hatramin'ny fandroahana.
c) Nitarika ny fisamborana azy ny faniratsirana vehivavy iray an'i UAE
Amin'ny tranga iray hafa momba ny fisamborana olona iray tao amin'ny seranam-piaramanidina Dubai, nisy vehivavy iray notanana am-ponja noho ny filazana fa nanompa an'i UAE. Ilay teratany amerikanina 25 taona dia voalaza fa nanao fanararaotana am-bava tany Emirà Arabo Mitambatra rehefa niandry taxi-be tao amin'ny seranam-piaramanidina Abu Dhabi.
Ity karazana fihetsika ity dia heverina ho manafintohina lalina ny vahoaka Emirati, ary mety hiafara amin'ny sazy an-tranomaizina na lamandy.
d) Vehivavy mpivarotra nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina Dubai noho ny fananana zava-mahadomelina
Tamin'ny raharaha mafimafy kokoa, vehivavy mpivarotra iray no nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina Dubai noho ny fahitana heroine tao anaty entany. Tratra niaraka tamin'ny heroine 27 izay nafeniny tao anaty entany ilay vehivavy 4.28 taona, avy any Ozbek. Notazonina tao amin'ny seranam-piaramanidina izy ary nafindra tany amin'ny polisy misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina.
Ny fiampangana amin'ny fihazonana zava-mahadomelina any Emirà Arabo Mitambatra dia mety hitarika any amin'ny 4 taona an-tranomaizina fara-fahakeliny ary lamandy sy fandroahana ivelan'ny firenena.
e) Lehilahy Nosamborina tao amin'ny Seranam-piaramanidina Noho ny Fihazonana Marijuana
Amin'ny tranga iray hafa, lehilahy iray nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina Dubai ary nigadra 10 taona, niaraka tamin'ny lamandy Dhs50,000 noho ny fanondranana rongony tao aminy. Tratra niaraka tamin’ny rongony roa fonosana ilay teratany afrikanina rehefa nahatsikaritra zavatra miendrika matevina tao anaty sakaosy teo am-pijerena ny entany ny mpitandro ny filaminana. Nilaza izy fa nalefa hanatitra ny entana ho tambin'ny fanampiana amin'ny fitadiavana asa any UAE ary nandoa ny saran'ny dia.
Nafindra tao amin’ny sampana miady amin’ny rongony ny raharahany ary notanana am-ponja noho ny fanondranana rongony.
f) Vehivavy Nosamborina Nitondra Cocaïne 5.7kg
Taorian’ny fizahana ny entan’ny vehivavy iray 36 taona, dia fantatra fa nitondra cocaïne milanja 5.7 kg tao aminy. Nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina Dubai ilay ramatoa Amerika Latina ary nanandrana nanondrana an-tsokosoko tao anaty tavoahangy shampoo.
Ohatra vitsivitsy amin'ireo olona nosamborina tao amin'ny seranam-piaramanidina UAE noho ny antony samihafa ireo. Zava-dehibe ny fahafantarana ny mety ho vokany raha mandika lalàna iray ao amin'ny firenena ianao, na dia tsy fantatrao aza. Noho izany dia manaja sy mitandrema hatrany ny fihetsikao rehefa mandeha any UAE.
Na dia tsy ny ady ara-dalàna rehetra aza dia mila ny fanampian'ny mpisolovava, amin'ny toe-javatra maro misy fifandirana ara-dalàna, toy ny rehefa hita fa voatazona ao amin'ny seranam-piaramanidina UAE ianao, dia mety hampidi-doza izany raha mandeha irery ianao.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo antony lehibe tokony hanananao mpisolovava irery raha voatazona any Dubai ianao na voasambotra any amin'ny seranam-piaramanidina: